बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने के नगर्ने ? जान्नुहोस् - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
सामान्‍यतया मानिसहरु आफ्नो दैनिकी अनदेखा गरिरहेका हुन्छन् जसले उसको जीवन शैली नै खतरामा पर्न जान्छ। हामी हरेक दिन निदाउँछौं। बिछ्यौनामा पल्टिन्छौ र बिहानी पख उठ्छौँ।विशेषतस् विहान जब तपाइको आँखा खुल्छ, तब के गर्नु हुन्छ त रु प्रत्‍येक बिहान उठ्दा भुलेर पनि यी काम नगर्न एस्ट्रोलोजर प्रेम शर्मा सुझाव दिन्छन्।
३.बिहान बिहान कसैमाथि रिस नदेखाउनुस्। कसैले काम बिगारेको छ भने नम्र भएररसकारात्मक भएर सम्झाउने गर्नुस्।अपशब्द बोल्दै नबोल्नुस्।
७.जनावरहरुको तस्बिररफोटो रुममा राख्नु भएको छ भने कृपया हेरेर बस्ने काम नगर्नुस्। शास्त्रीय ढंगले जनावरहरुको तस्बिर हेर्न उचित मानिएको छैन बिहान बिहान।
रुघा लागेर नाक बन्द भएर हैरान हुनु भएको छ ? यसो गर्नुहोस्